Wholesale Strong acid cation exchange resin Mugadziri uye Mutengesi | Dongli
Yakasimba Acid Cation Resins
Resins Chimiro chePolymer Matrix Mabhesi Ose RinoshandaBoka Ionic Fomu Yese Shanduko Unyanzvi (meq / ml muNa+ ) Mhepo Yemukati se Na+ Particle Saizi mm KuzvimbaH → Na Max. Kutumira Kurema g / L
GC104 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 1.50 56-62% 0.3-1.2
GC107 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
GC107B Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 1.90 45-50% 0.3-1.2
GC108 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.00 45-59% 0.3-1.2
GC109 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.10 40-45% 0.3-1.2
GC110 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.20 38-43% 0.3-1.2
GC116 Gel Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.40 38-38% 0.3-1.2
MC001 Macroporous Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 1.80 48-52% 0.3-1.2
MC002 Macroporous Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.00 45-50% 0.3-1.2
MC003 Macroporous Poly-styrene ine DVB 95% R-SO3 Na+/ H+ 2.30 40-45% 0.3-1.2
Yakasimba Acid Cation
Yakasimba acid yekutsinhana resin imhando yekasi yekutsinhana resin ine sulfonic acid boka (- SO3H) seboka guru rekutsinhana, iro rinogona kushandiswazve.
Iko kushandiswa kwezvakajairwa zvicherwa acids zvakafanana. Rudzi rweyinyore mvura resin yakasimba asidi asidi ion resin. Iyo yakakosha catalyst mhando resin inofanirwa kushandiswa, nekuti zvakare inoenderana nekukanganiswa kwehydrogen ion kuburitsa mwero, pore saizi uye crosslinking degree pane iyo reaction.
Mukushandisa kwemaindasitiri, zvakanakira ion resin resini yakakura yekurapa kugona, yakafara decolorization renji, yakakwira decolorization kugona, kubviswa kweakasiyana ions, kudzokororwazve patsva, hupenyu hurefu hwebasa uye yakaderera mashandiro emutengo (kunyange hazvo mutengo weimwe-nguva kudyara wakakura) . Mhando dzakasiyana dzehunyanzvi hutsva hwakavakirwa paIon exchange resin, senge chromatographic kupatsanurwa, kusasiyiwa ion, electrodialysis, nezvimwewo, vane mabasa avo akasarudzika uye vanogona kuita rakasiyana basa rakakosha, iro rakaoma kuita nedzimwe nzira. Iko kuvandudza uye kushandiswa kweion shanduko tekinoroji ichiri kusimukira nekukurumidza.
1. Ion exchange resin ine imwe huwandu hwemvura uye haifanire kuchengetwa pamhepo. Munguva yekuchengetera uye kutakurwa, inofanirwa kuchengetwa yakanyorovera kudzivirira kuomesa mweya uye kupera mvura, zvichikonzera kuputswa kwebwe. Kana iro resini rakashayiwa mvura panguva yekuchengetera, rinofanira kunyoroveswa mune yakanyoroveswa mvura yemunyu (10%) uye wozosvinudzwa zvishoma nezvishoma. Haifanirwe kuiswa zvakananga mumvura kudzivirira kukurumidza kuwedzera uye kutyora resini.
2. Munguva yekuchengetedza uye kutakura munguva yechando, iyo tembiricha inofanirwa kuchengetwa pa5-40 ℃ kudzivirira supercooling kana kupisa zvakanyanya, zvinozokanganisa mhando. Kana pasina chakadziya chekudzivirira michina munguva yechando, iyo resin inogona kuchengetwa mumvura ine munyu, uye kusangana kwemvura yemunyu kunogona kutemerwa zvichienderana netembiricha.
3. Zvigadzirwa zvemabhizimusi zveion resin resin inowanzo kuve neiyo shoma shoma yepolymer uye isina kugadzikana monomer, pamwe neisina kujairika tsvina simbi, lead uye mhangura. Kana iro resini rikasangana nemvura, asidhi, alkali kana zvimwe zvinogadziriswa, zvinhu zviri pamusoro zvinozoendeswa mukati memhinduro, zvichikanganisa kunaka kwemvura inoyerera. Naizvozvo, iyo resin nyowani inofanirwa kufananidzirwa isati yashandiswa. Kazhinji, iro resini rinowedzerwa zvizere nemvura, uyezve, izvo zvisina kujairika marara (kunyanya esimbi makomputa) zvinogona kubviswa ne4-5% sanganisa hydrochloric acid, uye iyo yakasviba tsvina inogona kubviswa ne 2-4% sanganisa sodium hydroxide mhinduro. Kana ikashandiswa mukugadzirira mishonga, inofanirwa kunyoroveswa mu ethanol.
Pashure: Asina kusimba asidi cation yekuchinjana resin
Zvadaro: Yakavhenganiswa Mubhedha Resin